ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ်. ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်
ⓘ ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ်. ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ် သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ အနောက်ဘက်၊ လှိုင်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်း ထန်းတပင်မြို့နယ် တွင် တည်ရှိသည်။ ..
ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်း တက္ကသိုလ် ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ် ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ်
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း - ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း - ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း - ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဒဂုံတက္ကသိုလ် - ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တက္ကသိုလ် ဒဂုံမြို့နယ် - ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း - ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်
ဤဖော်ပြသော မြို တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ် ယခု အနည်းငယ် ၊ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တော ၊ ဘူးသီးတောင် ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ကျောက်တော် ယိုးချောင်းဖျား ၊ အန္ဒိယနိုင်ငံ မနိပူရ ၊ အာသံ၊ ထရီပူရ ပြည်နယ် နှင့် ဘင်္ဂလာ ဒေ့ရှ် နိုင်ငံ စစ်တကောင်း တောင်ကြား ဒေသများ အတွင်း ယနေ့တိုင် နေထိုင် လျှက် ရှိကြ ပါသည်။ ဤလူမျိုး များထဲမှ မြို ၊ မရူ စသည် တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ၁၃၅ မျိုးသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ စာရင်း ထဲမှာ ပါဝင် ကြောင်း မှတ်သားရပါသည်။ မရူ=Mru တို့ မှာ မြို =Mro နှင့် မူရောင်= Murong ဟုလည်း ကောင်း ၊ မရိုစာ Mroo-tsa= မြိုစာ Mro-cha ဟုလည်းကောင်း ခေါ်တွင်၏။ ချတ် ...
ⓘ ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ်
ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကို ၈၈၈၈ လူထုဆန္ဒပြပွဲပေါ်ပေါက်ပြီးနောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အားပိတ်လိုက်ပြီးနောက် ၁၄ နှစ်အကြာ ၂၀၀၂ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
လက်ရှိရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်၏ ပါမောက္ခချုပ်မှာ ဒေါက်တာ တင်မောင်ထွန်း ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်မှာ ဒေါက်တာ စိုးစိုးအေးသင်ကြားရေး နှင့်ဒေါက်တာ အေးအေးခိုင်စီမံ ဖြစ်သည်။
အဓိကအားဖြင့် သင်ကြားရေး ဌာန နှင့်စီမံရေး ဌာန ဟူ၍ ၂ပိုင်း ရှိသည်။
သင်ကြားရေးဌာန ၁၄ ခုရှိပြီး ယင်းတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
စီမံရေးဌာန၁၂ခု ရှိသည်။ စီမံရေးဌာနများမှာ-
အ ဝေးသင် ဌာနခွဲ၊
ICT ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ၊
စာမေးပွဲ နှင့် ဘွဲ့နှင်း၊
Wikipedia: ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ်